Ngathi | I-Zhejiang Safemate yoKhuseleko lweZithuthi kunye neTekhnoloji yeNgxamiseko Co., Ltd.
I-Zhejiang Safemate yoKhuseleko lweZithuthi kunye neTekhnoloji yoNgxamiseko Co,. Ltd.yishishini lobuchwephesha eligxile kwiimveliso zongxamiseko ezizenzekelayo, nangaphezulu kweminyaka engama-20 yamava. Uhlalutyo lwentengiso lobungcali, amandla oqinileyo okusombulula kunye nokwenza ngokwezifiso kuyasigcina sisenza imveliso ephambili kwishishini likaxakeka kwimoto kwihlabathi liphela.
Zonke iimveliso zethu ziyilelwe ukusetyenziswa ngokungxamisekileyo kwaye zigubungela zonke iimeko ezindleleni, imveliso ibandakanya i-booster cable, itshaja yebhetri, i-starter yokutsiba, iikiti ezingxamisekileyo, intambo yokurhuqa kunye nezinye izinto zikaxakeka. Nokuba yeyiphi na indlela esecaleni kwendlela, inkampu yangaphandle, ukubuyela kwebhetri, okanye imeko yongxamiseko ebusika, sisisombululo sakho esipheleleyo semicimbi engxamisekileyo.
Njengenkampani ekhokelela kwihlabathi liphela, ukhuseleko kunye nomgangatho yeyona nto iphambili kwixabiso lethu. Inkampani yethu edlulileyo kwi-ISO90001, i-ISO14001 ngumntu wesithathu. Kwaye iimveliso zethu zinazo zonke izatifikethi zokugcwalisa abathengi abavela kwiimarike ezahlukeneyo, njenge-GS, i-CE, i-ROHS, i-REACH, i-UL kunye neqela le-R & D elinamava lokutyhala iimveliso zethu kwinqanaba lomgangatho.
UKHUSELEKO luya kuqhubeka nokuqhubela phambili kunye nabathengi bethu abaxabisekileyo kwaye sijonge phambili ekunikezeleni ngeyona nkonzo yethu intle kuwe.